I-Cozy Pine Creek Waterfront Cottage (Ikhabhathi)
Indlu yethu epholileyo engaphambili emanzini inendawo entle yangaphandle enekhaya elifudumeleyo, elitofotofo nelicocekileyo elilungele ukubaleka okanye ikhefu lokuphumla kwizinto eziyinyani. Siyakwamkela ukuba wabelane "ngesilayidi esincinci sezulu". Sifumaneka eWaterville, PA......kumgama omfutshane wemizuzu engama-35 ukusuka eWilliamsport nakwiLittle League World Series (LLWS).
Indlu yethu epholileyo engaphambili emanzini inendawo entle yangaphandle enekhaya elifudumeleyo, elitofotofo nelicocekileyo elilungele ukubaleka okanye ikhefu lokuphumla kwizinto eziyinyani. Siyakwamkela ukuba wabelane nathi "ngesilayidi esincinci sasezulwini".Iindwendwe zethu zikonwabela ukukhwela inqanawa, ukukhwela iphenyane, ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile (.5 yeemayile ukusuka kwiRails ukuya kwiiTrails), ukuqubha, ukuloba iimpukane, iivenkile ezi-2 zokubhabha, ukuphumla kwi-hammock okanye nge. umlilo, izidlo ezininzi ezimangalisayo. Mhlawumbi uya kubona ukhozi olunempandla, igola eliluhlaza, amarhanisi aseKhanada, idada lasendle, iminenki, iotter, ikingfisher, iingcungcu, amaxhama, amatakane asendle, njalo njalo. ILittle League World Series), iJersey Shore, iNippenose Valley (ikhaya leefama ezintle zama-Amish), iLancaster & kakhulu ngakumbi!!! Indlu yethu izaliswe luthando & iyakwamkela! Nceda uze nokufudumala kwakho kwaye wonwabele uxolo noxolo. Ipropathi ayitshayi, ngoko ke nceda ucinge ngezinye iipropathi ukuba ilungu leqela lakho liyatshaya.
Akukho ngingqi!! Sibekwe kwinqanaba lesiseko se-creek ye-Pine Creek Valley, kunye ne-creek kuphela, izindlu zexesha kunye ne-Rt 414. Gcwalisa iintsuku zakho ngokuloba, i-kayaking, i-canoeing, i-hiking, ibhayisekile okanye ukuphumla nje kwi-hammock. Yonwabela iingokuhlwa zakho ujikeleze umlilo, ujonge inkwenkwezi kwaye umamele isandi esithomalalisayo somlambo ngasemva. Ukuphuma kosuku, ndwendwela iVenkile yeLizwe yaseMcConnell kunye neVenkile yeFly ukuze ufumane inkonzo ethambileyo, iimpahla zokuloba kunye nezinye izinto ezilungileyo kwidolophu enqabileyo yaseWaterville engaphantsi kweekhilomitha ezi-2. Ukonwabele yonke okanye inxalenye yeemayile ezingama-60 zeeRails eziya kwiiNdlela ezineendawo zokungena eWaterville nakwiindawo ezingqongileyo. Indawo ebukekayo yasePennsylvania Grand Canyon, iSlate Run Tackle Shop (umthengisi weOrvis) kunye neWellsboro ethandekayo zonke zikude nje ukusuka kuthi. Endleleni yonwabela iindawo zokutyela ezininzi kunye neethaveni ezinomoya omnandi kunye nokutya okumnandi !!
Kuya kufuneka usibone kabini kuphela, kunye nepropathi yonke eyeyakho ngexesha lotyelelo lwakho !! Sizakubulisa ekufikeni kwakho ukuze sikubonise ipropathi kwaye uphendule nayiphi na imibuzo onokuthi unayo kwaye sikubone ngokufutshane xa uphuma uyokuthi ndlelantle kwaye ubuyisele idiphozithi yakho yokhuseleko, ucingela ukuba akukho monakalo. Ngaphandle koko, sihlala sifikeleleka ngefowuni kwaye ngokuqinisekileyo siyakudlula ukuba unengxaki (sihlala malunga neekhilomitha ezingama-30 ukusuka kwipropathi).
Kuya kufuneka usibone kabini kuphela, kunye nepropathi yonke eyeyakho ngexesha lotyelelo lwakho !! Sizakubulisa ekufikeni kwakho ukuze sikubonise ipropathi kwaye uphendule nayiphi…